Jianglin Steel Corporation မှကြိုဆိုပါသည် - Jiang Lin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်း
Jianglin Steel Corporation မှကြိုဆိုပါသည်
ဘလော့: 2019 ဘလော့
ဘလော့, ဘလော့: ဘလော့, ဘလော့, ဘလော့, ဘလော့, ဘလော့, ဘလော့ […]
ဘလော့ “ဘလော့ + ဘလော့” ဘလော့ “ဘလော့” ဘလော့, ဘလော့, ဘလော့, ဘလော့ 1000 ဘလော့ […]
ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။: ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ – ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။
ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 24 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 3,679 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။6ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, […]
ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 7.8% ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။
ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 15, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 2019 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 7.8 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 900.1 တန်ချိန် သန်းပေါင်းများစွာ 2019, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 0.2 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 874.9 တန်ချိန်သန်း. ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ […]
ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ ,သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။
သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။, သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။, သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။ “သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။”, သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။ “သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။”. သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။, သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။, သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။ […]
သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။: သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။ 50.2 သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။
သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။ 2019 သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။ 50.2, တက် 2.5 သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။, သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။ 10 သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။5အမှတ်များ,4သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။ 1 သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။, သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။, သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။, […]
Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်?
Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်: Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည် 50%, Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်;Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်, Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်. Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်, Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်, Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည် […]
Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်
Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်, Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်, Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်, ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။, ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။, ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။ […]
ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။
ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။ 23, ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။, ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။ 2001 ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။ 3.60% ရန် 3510 ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။ 2001 ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။, တက် 2.99% ရန် 3509 ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။, ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။ […]
သံမဏိစက်ရုံ၏ အောက်ခြေကို နိုင်ငံများက မျှော်လင့်ကြသည်။: ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။, ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။
Hebei ဒေသ ပင်မပိုက် စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပြီး ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား စျေးကွက် ဖိအားကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် welded အဖြစ်လည်းကောင်း ပိုက်စျေးနှုန်း ခိုင်မာနိုင်သည်: ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 25 ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 1.75% ရန် 2%, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ […]
ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။: [ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။] ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။: ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။2ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 8 ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။: ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ (ထုတ်လုပ်မှုဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကန့်သတ်ထားသည်။ 2, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, 8) ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 0.6% ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 3,974 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, 4,103 ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 4,103 ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 0.9%, 0.9% နှင့် 0.3% ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။. ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ […]
ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။: ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။. ယနေ့ ဖက်ဒရယ်ရံပုံငွေသည် ယခုနှစ် ဒုတိယအတိုးနှုန်းဖြတ်တောက်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။, တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။, တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။ […]
တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။ “တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။” 10% တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။
တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။, တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။, တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။, တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။, တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။ 10%;တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။, ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။ 17.2 တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။ […]
တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။
အရင်းအမြစ်: တရုတ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဝါဒများကို တန်ပြန်ချိန်ညှိမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ […]
တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။: တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ 05, 2018 တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။: တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။: 23 တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။. တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။. တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ 8 တန်ချိန်သန်း, တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ […]
တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။: တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ – တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။?
0တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ , တရုတ်သံမဏိနှင့် သံမဏိအသင်းမှ သံမဏိလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လတွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။ 160-250 ဟီးဟီး အနာဂတ်ကို စောစီးစွာ သုံးသပ်ပါ။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။ 250 အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။ 16-25 အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။ 3720 အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။ […]
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။: အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။. ဖြည့်စွက်ကာ, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။ […]
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။ “အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။” အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း စျေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားတယ်။, နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။, နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။, နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။ “နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။ […]
နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။
နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။: နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။, နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။. နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။, နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။, နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။ […]
နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။: နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။
နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။, နှင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆင့်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ် subprime mortgage အကျပ်အတည်းထက် ကြီးမားဖွယ်ရှိသည်။, ကမ္ဘာ့သံမဏိလိုအပ်ချက်သည် ရေတိုတွင် ဆက်လက်ကြီးထွားလာမည်ဟု ဘရာဇီးလ်သံမဏိအသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ၌ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။, ကမ္ဘာ့သံမဏိလိုအပ်ချက်သည် ရေတိုတွင် ဆက်လက်ကြီးထွားလာမည်ဟု ဘရာဇီးလ်သံမဏိအသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ၌ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ,ကမ္ဘာ့သံမဏိလိုအပ်ချက်သည် ရေတိုတွင် ဆက်လက်ကြီးထွားလာမည်ဟု ဘရာဇီးလ်သံမဏိအသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ၌ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။” ကမ္ဘာ့သံမဏိလိုအပ်ချက်သည် ရေတိုတွင် ဆက်လက်ကြီးထွားလာမည်ဟု ဘရာဇီးလ်သံမဏိအသင်း၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ၌ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ […]
ဘာကြောင့် Jianglin သံမဏိ
1.Hot roll တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါ။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူထံမှ Hot roll ကုန်ကြမ်းကို ၀ ယ်ပါ,ထို့ကြောင့်ပထမနေရာမှကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည် ။၂.QC သည်အလွန်တင်းကျပ်သည် ။QC ၀ န်ထမ်းများသည်ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းထုတ်ကုန်အသေးစိတ်တိုင်းကိုစစ်ဆေးသည် ။4.professional အရောင်းအဖွဲ့။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဈေးကွက်ကိုဖောက်သည်တွေသိဖို့ […]
1.High GlossThailand သည်ဖောက်သည်များကပိုမိုလိုအပ်သောမြင့်မားသောတောက်ပသောထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်တောင်းဆိုသည် 80% တောက်ပ ,Jianglin Steel သည်ကွိုင်တိုင်းကိုစမ်းသပ်သည်။ 2.Color test ထိုင်းစျေးကွက်တွင်သဘာဝအညိုရောင်ရှိသည်,nuvo အပြာရောင် ,အလွန်ရေပန်းစားသောအရောင်ဖြစ်သောအစိမ်းတောက်တောက် ,Jianglin Steel သည်ဖောက်သည်နမူနာများနှင့်လိုက်ဖက်သောအရောင်တိုင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်,စျေးကွက်လိုအပ်သောအကျယ်သည် ၉၁၄ မီလီမီတာဖြစ်သည် ,1219မီလီမီတာ,ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်သူသည်လိုက်နိုင်သောအကျယ်ကိုတိုင်းတာသည် […]
1.Tangshan ရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်သည် 30%-50%.2. Hanxing Wu'an productionရိယာသည်.3ပြီလ ၃.၃ တွင် Jiangsu ပြည်နယ်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်, 14 ကြိမ်မြောက်ငါးနှစ်စီမံကိန်း၏ပထမနှစ်တွင်တောင်ပိုင်း rebarIn ၏ကန့်သတ်ထုတ်လုပ်မှု, တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတည်ထောင်ခြင်းနှစ် ၁၀၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်, COVID-19 ပြီးနောက်ကမ္ဘာသည်မြှင့်တင်ရန်စိတ်ထက်သန်သည် […]
အဆိုပါ galvalume အပေါ်ယံပိုင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပါဝင်သည်ဟုအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ် 55% လူမီနီယံ, 43.4% သွပ်နှင့် 1.5% အလေးချိန်အားဖြင့်ဆီလီကွန်, သောစဉ်ဆက်မပြတ်ပူကျဆင်းလာဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်သံမဏိမှလျှောက်ထားသည်. Galvalume သံမဏိပြားသည်လူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများကိုပေးသည် (လူမီနီယံ) နှင့်ဇင့်ကိုအုပ်ထားသောသံမဏိပြား (သွပ်ရည်စိမ်). အလူမီနီယမ်/ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်းတွင်အကာအရံခံနိုင်ရည်နှင့်အပူရှိသည် […]
1.CRC （Base metal st တောင့်တင်းခိုင်မာမှုနှင့်အဓိကအားဖြင့်အဓိကတာဝန်ရှိသည် ။Zinc Coating သည်၎င်းတွင်ချေးမသောခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။, အပူခုခံ, ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်စက်သုံးနိုင်မှု ၃။ ဓာတုဗေဒအပေါ်ယံပိုင်းအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အောက်ခံပြား၏ကော်စေးနှင့်ဆန့်ကျင်မှုဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း ၄။Primer Coating သံမဏိပန်းကန်နှင့်ဆေးသုတ်မျက်နှာပြင်အကြားကော်ကြားမှုကိုမြှင့်တင်ပါ။, သင့်တော်သော color tone5.Top ၏လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည် […]
ထုတ်ကုန်သံချေးမသွားစေရန်အလွှာပေါင်းစုံကာကွယ်ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာထုပ်ပိုးထားသည်,ကတ်ထူပြားကိုသုံးတယ် , ပလတ်စတစ်ရေစိုခံနှင့် kraft ရေစိုခံ ,ရေသည်ထုတ်ကုန်များ၏ပုံကိုပျက်စီးစေသောကွိုင်အတွင်းမှရေကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့က palstic water proof ကိုသာသုံးလျှင်ကျွမ်းကျင်သောထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်သည်။,ရေလည်းရနိုင်ပါတယ် […]
PPGI / PPGL COIL နှင့် GALVALUME STEEL COILS များ
PPGI / PPGL ပုံစံ: နာမည်အပြည့်အစုံကိုကြိုတင်သွပ်ရည်စိမ်ထားသည် / galvalume သံမဏိကွိုင်, HDGI ၏အပေါ်နှင့်အောက်ဘက်၌ယွန်းခြယ်သည် / ALU-ZINC ကွိုင်. ၎င်းတို့ကိုအများအားဖြင့်အရောင်သုတ်ဆေးများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်သုံးသည်, ဂိုဒေါင်ကဲ့သို့, prefab အိမ်, နှင့်ကားဂိုဒေါင်, PPGI ၏အားသာချက်များစသည်တို့ / PPGL သည်ရိုးရိုးအုတ်များထက်ပေါ့ပါးသည် […]
အမေရိကန်’ ဇန်နဝါရီ နှစ်မှစ၍ HDG တင်ပို့မှုကျဆင်းခဲ့သည်
အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏စာရင်းများအရ (USDOC), အမေရိကန်ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တင်ပို့ခဲ့သည် 103,000 hot-dip galvanized တန်ချိန် (HDG) ဇန်နဝါရီတွင်စာရွက်နှင့်စာရွက်, တိုးလာသည် 13.2% ကျဆင်းနေစဉ်ယခင်လမှ 10.6% လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်အလားတူကာလမှ. ပို့ကုန်တန်ဖိုးသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၁၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်, ၉၈ ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ […]
ထိုင်ဝမ်အကောက်ခွန်မှတရားဝင်အစီရင်ခံစာအရ, ယခုလဇန်နဝါရီလတွင်ထိုင်ဝမ်ရှိကွိုင်၌သံရည်စိမ်ထားသောသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိစာရွက်စုစုပေါင်းတင်သွင်းမှုသည်အနီးအနား၌ရှိသည် 4,970 တန်ချိန်, အားဖြင့်ကျသည် 62.5% လပေါ်မှာလ, နှင့်နီးပါး 77% တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်. သူတို့ထဲတွင်, ကွိုင်၌ပူသောနှစ်ထားသောသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိစာရွက်၏တင်သွင်းမှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုး […]
တရုတ်သွပ်ရည်စိမ်အပင်များထုတ်လုပ်မှုပြန်လည်စတင်ရာတွင်နှောင့်နှေးမှုသည်ပူနွေးသောလိပ်ပြားအတွက်ရေတို ၀ ယ်လိုအားကိုထိခိုက်စေသောကြောင့်၎င်းသည်ပူနွေးသောလိပ်စာထုတ်လုပ်သူများစာရင်းတွင်ဖိအားကိုဆက်လက်တိုးစေခဲ့သည်။. နောက်နှစ်ပတ်လောက်နေမှ, သွပ်ရည်စိမ်အပင်များပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှုန်းမှာနိမ့်ကျနေဆဲဖြစ်သည်, ပူသောလိပ်ထားသောအမြှောင်းလိုင်းအချို့ […]
12… 15 နောက်တစ်ခု